Phaseolin powder (13401-40-6) hplc = 98% | AASraw Fat Kurasikirwa powder
/ Products / Fat Kurasikirwa poda / Phaseolin upfu
Rating: SKU: 13401-40-6. Category: Fat Kurasikirwa poda
MUTSVENE unobatsira nekugadzira zvigadzirwa kubva ku gramu kusvika pakukura kwePasololin powder (13401-40-6), pasi peCGMP mutemo uye trackable quality control system.
Phaseolin powder inonzi glycoprotein ine gumi inounganidza muprotini storage vacuoles inowanzobatanidza bhinzi (Phaseolus vulgaris L.) mbeu. Kurwisana neproteolytic degradation kunogona kuva chinhu chinokosha chechizvarwa phaseolin powder, zvichibvumira kugadzikana kwaro kuunganidza muprotini storage vacuoles.
Molecular Kurema: 322.358
Raw Phaseolin powder mukurema kurasikirwa
Phaseolin upfu (CAS 13401-40-6)
Phaseolin powder is glycoprotein inowanikwa yakawanda muproteiniti yokuchengeta vacuoles inowanzobatanidzwa (Bese Phausolus vulgaris L.) mbeu. Kurwisana neproteolytic degradation kunogona kuva chinhu chinokosha chechizvarwa Phaseolin pfumbi yakasviba, zvichiita kuti chigarire chayo chiwedzere muprotini storage vacuoles. Kutsvaga kweprotease-resistant structure inobatanidza neungano ye Phaseolin powder subunits muzvigadziro, nekukurumidza uye kunobudirira hunoitika mumagumo ekupedzisira. Mune mahesheni e-bean cotyledonary Phaseolin yakasvibiswa poda yakagadziriswa inogona kubatsirwa nemagetsi uye inowanikwawo muhupo hwe inhibitors ye-N-glycosylation yakabatana. Chimwe nzira yakagadzirirwa kuchengetwa kwemasununiti asina kuonekwa uye emakwikwi ekokorodzano mumutambo wekare wemugwagwa unovanzika yaizovimbisa kuti chimiro cheprotease-chinogadzikana cheprotini chinotakurwa kuenda kunzvimbo yekuchengetedza vacuoles, zvichiita kuti huwandu hunobudirira hwekuchengetedza protein yakawanda.
Yambiro paRaw Phaseolin powder
Pfungwa, masimba enzyme-anovharira phaseolamin anoderedza huwandu hwekarobhydrate-based macalorie ayo anonwiwa uye anoshandurwa kuita mafuta emuviri. Isingakwanise kupaza masiteki pasi kuita mashuga akareruka, gadziriro yekugaya inodzinga sadza rakaganhurwa zvishoma panguva yekufamba kwematumbu. Chidzidzo chakaitwa paUniversity yeCalifornia chakaratidza kuti phaseolamin inodzivisa kana kunonoka kugaya kwemasteki akaomesesa, nokudaro ichideredza huremu hwese uye saizi yechiuno chevane huwandu hwehuremu. Kunyangwe vamwe vanovharira mafuta senge orlistat (zita rekutengeserana Alli) rinogadzira risingafadzi gastrointestinal mhedzisiro nekuda kweiyo enzyme-yekuvharira chiitiko, mazhinji emakiriniki miedzo yakaratidza yakaderera chiitiko chehurwere uye kurwadziwa nemudumbu pakati pevashandisi vephayolamin.
Kuderedza Glycemic Index
Nekuti chena yeitsvo bhinzi yakabviswa inopesana nekudyiwa kwemakabohydrate uye kushandurwa kwavo kuita mashuga akareruka, inogona kupa ingangoita kurapwa kwechirwere cheshuga uye inoshanda hypoglycemia. Dr. Jay Udani – chiremba wezvekurapa weMedicus Research uye munyori we2007 University of California ongororo yePhaseolin mbishi yakasviba (CAS 13401-40-6) -akaratidza kuti mukomboni unogona kudzikisa index yeglycemic yezvikafu zvine starch sechingwa chena. . Nekukanganisa kugona kwemuviri kuwana glucose kubva mune izvi zvekudya, Phaseolin poda inogona kudzivirira zvinokatyamadza spikes mushuga yeropa uye zvichikonzera matambudziko. Pamusoro pezvo, kuwedzererwa kwekuwedzera kunogona kudzivirira kana kunonoka kutanga kweType 2 chirwere cheshuga muvanhu vane hypoglycemia inoshanda (pre-diabetes). Kunyangwe izvi zvidzidziso zvekushandisa zvichiita sekuvimbisa, ivo havana kuongororwa nemakiriniki makuru emakiriniki.
Phaseolin powder, iyo yakawanda globin mbeu yekuchengetedza mapuroteni emukoko wenyuchi, Phaseolus vulgaris L., nhamba dzinosvika ku50% yehuwandu hweprotini yembeu. Iko kukurumidza kuwedzerwa kwePaulolin powder mu mbeu inokura inotangira zvemazuva 14 mushure mokupenya uye inoenderera kune mamwe mazuva 12-14 kwenguva refu. Zvisinei, chiyero uye chiyero chePasololin yakasvibiswa pfumbi yekuunganidza, yakabatana nekusiyana kwehutambo, kureba, kupera, uye chiyero chekushandiswa, zvakaratidzwa kuti zvinokonzerwa pakati pejenotypes. Chete 3 Phaseolin powder electrophoretic types, yakasarudzwa T, S, uye C mushure mekurima Tendergreen, Sanilac, uye Contender, pamwe chete, yakawanikwa pakati peC100 yakagadziriswa.
Nzvimbo dzakadzika dzemasikiromita masero uye isoelectric points ye 14 protein polypeptides yePaulolin powder, pamwe chete nee homology yakaonekwa kubva pepupe mapping, inoratidza kuti Phaseolin yaibaya puropeptidi yakafanana mapuroteni. Kubva pamigumisiro yepamuchinjiro pakati pemaruva ane ma matatu e-electrophoretic patterns, majee ekudzivirira ma polypeptides ega ega ePaulolin yaiwiswa mafuta ehuta anoonekwa kunge akabatanidzwa zvakasimba, anowanikwa muvhare uye zvese zvinowanikwa zvakanyanya. Kusiyana kwakasiyana-siyana muPasololin powder zvakagadziriswa, zvichienderana nekufungidzirwa kwekushandisa rocket immunoelectrophoresis, yakawanikwa pakati pemakwenzi emhonje. Kunyange zvazvo kuparadzaniswa kwevanhu vakawanda kuchiratidza kuenderera mberi kwekugovera uye kuwanda kwenhaka, mamwe mitsetse inokonzerwa nechekare yakakonzerwa ne Phaseolin yakasvibiswa poda kuunganidza inoita kutakura maitiro ezvishoma nemaitiro makuru. Ijena rimwe chete rinoderedza kuwanda kwePaulolin powder kusvika kudarika hafu yehafu yenguva dzakasarudzwa yakagadzirwa munguva pfupi mukusangana kwesango P. vulgaris.
Phaseolin powder Pure Raw (CAS 13401-40-6)
Nzira yekutenga Phaseolin powder (CAS 13401-40-6) kubva kuAASraw
Garcinia cambogia kubuda pfupa